टीपीएस सिरिया | सिरिया लागि मेरो टीपीएस समाप्त हुन्छ भने म के गर्न सक्छ? | USAHello
टीपीएस सिरिया - के तपाईं आफ्नो टीपीएस समाप्त हुन्छ जब गर्न सक्नुहुन्छ?
यहाँ सिरिया देखि मान्छे को लागि टीपीएस बारेमा जानकारी छ.
सेप्टेम्बर अद्यावधिक 23, 2019: संघीय दर्ता टीपीएस सिरिया लागि पुन: दर्ता लागि विवरण प्रकाशित गरेको छ.
विवरण बारे पुन दर्ता तल हेर्नुहोस्.
टीपीएस सिरिया - मेरो टीपीएस समाप्त हुँदा गर्छ?
टीपीएस विस्तार भएको थियो र अब मार्च मा समाप्त हुन्छ 31, 2021. को बाट घोषणा पढ्नुहोस् मातृभूमि सुरक्षा विभाग. थप विवरण खोज्न अरामीहरूलाई लागि टीपीएस.
तपाईं आफ्नो स्थिति परिवर्तन वा मार्च द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका छोड्ने आवश्यक हुनेछ 31, 2021. तपाईं केही भने, तपाईं गिरफ्तारी र आचरण जोखिम हुनेछ.
त्यहाँ भविष्यमा अर्को विस्तार हुन सक्छ, तथापि. विस्तार वा सिरिया लागि पद समाप्त गर्न अर्को निर्णय जनवरी मा वा पहिले हुनेछ 30, 2021.
संघीय दर्ता पुन दर्ता बारेमा सूचना प्रकाशित गरेको छ. यो भन्छन्, “60-दिन पुन दर्ता अवधि सेप्टेम्बर देखि चल्छ 23, 2019 नोभेम्बर मार्फत 22, 2019. (नोट: यो 60 दिन अवधिमा यो समसामयिक पुन रजिस्टर गर्न पुन registrants लागि महत्त्वपूर्ण छ र आफ्नो EADs समाप्त नभएसम्म पर्खन छैन।)”
सिरिया टीपीएस यस 18 महिना विस्तार गर्न अनुमति दिन्छ सिरियाली टीपीएस लाभ उठाउनेहरू टीपीएस लागि पुन: दर्ता र मार्च मार्फत काम प्राधिकरण संग संयुक्त राज्य अमेरिका मा रहन 31, 2021. पढ्न संघीय दर्ता सूचना मा विस्तार बारे विवरण.
तपाईं अर्को के बुझ्न मदत गर्न, तपाईं एउटा पढ्न सक्नुहुन्छ संगठन क्लिनिक बाट सूचना मा बुँदा को व्याख्या. र DHS पृष्ठ जाँच राख्न अरामीहरूलाई लागि टीपीएस कुनै पनि अन्य जानकारी को लागि.
को DHS भन्छन्, “DHS स्वतः लागि सिरिया को टीपीएस पद अन्तर्गत जारी EADs को वैधता विस्तार 180 दिन, मार्च मार्फत 28, 2020.” यो अहिले तपाईंको अवस्थित EAD प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ मतलब. तर तपाईं एक नयाँ EAD प्राप्त हुनेछ जब तपाईं पुन: रजिस्टर, तपाईं योग्य हुनुहुन्छ भने. USCIS भन्छन् यो एक मार्च नयाँ EADs जारी हुनेछ 31, 2021, योग्य सिरियाली टीपीएस लाभ उठाउनेहरू म्याद समाप्ति मिति समय मा रहे-दर्ता र EADs लागि लागू गर्ने. पढ्न संघीय दर्ता सूचना मा विस्तार बारे विवरण. र यहाँ छ क्लिनिक बाट सिरियाली टीपीएस धारकहरुको लागि केही सल्लाह.
तपाईं राम्रो कारण छ भने USCIS एक लेट दर्ता वा पुन दर्ता आवेदन स्वीकार गर्न सक्छ. तपाईं पुन: दर्ता अवधि छुटेका भने, को जाने USCIS टीपीएस जानकारी पृष्ठ र तपाईं योग्य यदि पत्ता लगाउन "अबेर फाईलिंग" मा क्लिक गर्नुहोस्.
टीपीएस सिरिया समाप्त हुन्छ भने के हुन्छ?
तपाईंको टीपीएस मार्च समाप्त हुन्छ भने 2021, आफ्नो कानुनी स्थिति तपाईं टीपीएस थियो पहिले यो थियो के फिर्ता जाने. तपाईं आफ्नो स्थिति परिवर्तन गर्न लागू गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिका छोड्न सक्नुहुन्छ. यो तपाईंको स्थिति समायोजन भनिन्छ.
तपाईं सबै नयाँ जानकारी अपडेट राखन सक्नुहुन्छ. तपाईं आफ्नो विकल्प सिक्न अहिले र त्यसपछि बीच समय प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ टीपीएस समाप्त हुन्छ भने, तपाईँको अर्को चरण को लागि आफू र आफ्नो परिवारलाई तयार.
तपाईँले एक भन्दा बढी वर्षको लागि संयुक्त राज्य अमेरिका मा गरिएको छ भने, तपाईं अझै पनि आश्रय लागि लागू गर्न सक्नुहुन्छ तर यो गाह्रो हुनेछ (र यो एक आश्रय मामला जीत पहिले नै कठिन छ).
थाहा आफ्नो अधिकार - ACLU
थाहा Detained आप्रवासियों लागि आफ्नो अधिकार नियमावली
संयुक्त राज्य अमेरिका मा सिरिया को दूतावास
संयुक्त राज्य अमेरिका मा सिरियाको दूतावास बन्द गरिएको छ, तर वाणिज्य अमेरिकी अरब च्याम्बर व्यक्तिगत र व्यापार कागजातहरू certifying मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो जन्म प्रमाणपत्र रूपमा, शैक्षिक डिप्लोमा, र निर्यात कागजातहरू. आफ्नो वेबसाइटमा थप जानकारी पाउन सहित कागजात र शुल्क पठाउनका लागि निर्देशनहरू.
वाणिज्य अमेरिकी अरब च्याम्बर,
1330 नयाँ हैम्पशायर Ave NW, सुइट B1,
वाशिंगटन, डीसी 20036.
फोन नम्बर छ: (202) 3347-5800.